Tun Tun's Photo Diary: Taungyi #3 (Taungyi market)
တောင်ကြီး ကို မိုး၇ာသီမှာေ၇ာက်သွားပေမယ့်လဲ ညကျတော်တော်လေးချမ်းလို.စောင်ခြုံပြီး အိပ်ရပါတယ်။ မနက် စောစော ထပြီးတော့ တောင်ကြီး မြို.မဈေးကို ပတ်ပါတယ်။ ဈေးရုံထဲကို မ၀င်ခဲ့ပါဘူး အပြင်ဘက်က ဟင်းရွက်၊ အသီး နဲ. အသားငါး တန်းပဲ ပတ်ခဲ့တာပါ။ ဈေးက ဟိုဘက်ခြမ်းနဲ. ဒီဖက် ခြမ်း ၂ ခု ရှိပါတယ်။ ၂ ဖက်ကို သွားခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကြီး မြို.မှာ Tourist နည်းတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဈေး ထဲမှာ ကင်မရာ နဲ. ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတယ်။
All these photo were taken at Taungyi market during my morning walk from hotel. The market is really huge with lots of vendors which sell vegetables, fruits, snacks, fishes & meats. If you haveachance to visit Taungyi, put this place in your itinerary.
တောင်ကြီးမြို.မှာ နေတဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ ဒီဈေးက အင်မတန် ၀ယ်စရာ အရမ်းကို စုံတဲ့ ဈေးပါ။ ဈေးဝယ်သူတွေနဲ. အရမ်းကို စည်ကားပါတယ်။ ပုံမှန် ရန်ကုန် နဲ. မန္တလေးမှာ မတွေ.ရတဲ့ အသီးအရွက်တွေ မုန်.တွေ လဲ တွေ.ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီကြောင်လေးက ဒီလောက် လူ၇ူပ်နေတဲ့ ဈေးမှာ ဒညင်းသီး အနံ.ကြိုက်လို. ထင်တယ်။ ငြိမ်နေတာပဲ။ ဒါမှမဟုတ်ေ၇ာင်းတဲ့သူက သူ.သခင်လား မသိဘူး။ မန္တလေးမှာ ဒညင်းသီး အားရပါးရ စားခဲ့ရလို. တောင်ကြီးမှာတော့ မစားဖြစ်လိုက်ဘူး။း)
ဒီကလေး ဒညင်းသီး ဗန်းထဲ မှာ ငိုနေတာ။ အပေါ့အလေးတွေ သွားလိုက်လို.ကတော့ ဒညင်းသီး တွေ ပိုမွေးသွားလိမ့်မယ်။း)
သ၇က်သီး က ဘာအမျိုးလဲ မသိဘူး။ ရင်ကွဲ သီးထင်တာပဲ။
အေ၇ာင်တွေ ဆိုးထားတာလား မသိဘူး။ မျှစ်အေ၇ာင်တွေ တောက်နေတာပဲ။
ကညွတ် တွေ စင်ကာပူမှာတော့ဈေးကောင်းတယ်။ တောင်ကြီးမှာတော့ဈေး ပေါလားမသိဘူး။
ဒီ ဈေးဆိုင်လေး ခင်းထားတာ အရမ်းကို သဘာဝဆန်တယ်။ အရမ်းသဘောကျလို. ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာ။
တောင်ပေါ်မြို.ဆိုပေမယ့် ငါးတွေ ပေါမှပေါ။
ကောက်ညှင်းပေါင်းေ၇ာင်စုံ ကို ဒီလိုထည့်ေ၇ာင်းတာ တောင်ကြီး ရောက်မှပဲ မြင်ဖူးတယ်။ ၀ယ်ဖြစ်မယ်ဆို၇င်တော့ ခိုပဲ ပေါင်းနဲ. အုန်းပေါင်း ကို ၀ယ်စားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ဈေးထဲမှာ ပတ်ပြီးတော့ မနက်စာ ပြန်သွားစားတယ်။ ပြီးတော့ Taxi နဲ. တောင်ကြီး မြို. က နာမည်ကြီး ဘု၇ားတွေ သွားဖူးတယ်။ နောက်ပို.စ် ကို စောင့်ဖတ်ကြပါဦး။
at 3/06/2014 04:44:00 AM
Labels: Food, Myanmar, Myanmar Food, Street, Taungyi
Anonymous March 6, 2014 at 5:56 AM
wanna go to that market.
ဈေးတန်းလေးက ဝယ်ချင်စရာ ...
လက်​ရာ​လေး​တွေ ပုံ​ကောင်း​တွေ​ကြောင့်​ မြန်​မာပြည်​ကို လွမ်းလိုက်​တာ
Tun Tun March 8, 2014 at 4:43 AM